Ekpere nke Jisos n’onwe ya kpere bu nke Padre Pio | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ekpere nke Jizọs n’onwe ya kwuru (Fr. Pio kwuru, sị: gbasaa ya, bipụta ya)
"Onyenwe m, Jizọs Kraịst, nabata onwe m maka oge m hapụrụ: ọrụ m, oke m nke ọ ofụ, nchegbu m, ike gwụrụ m, enweghị ekele nke ndị ọzọ nwere ike ịbịakwute m, ike ọgwụgwụ, owu ọmụma na-ejide m ụbọchị, ihe ịga nke ọma, ọdịda, ihe niile na-efu m, nsogbu m. N’ime ndụ m niile, achọrọ m ime otu okooko osisi juru ebe niile, dobe ha n’aka Nwanyị Dị Nsọ; Ya onwe ya ga-eche inye ha ha. Ka ha bụrụ nkpuru nke ebere maka nkpuru-obi niile na uru ruru m n'ebe ahụ n'elu igwe.
Padre Pio na ekpere
Achọrọ Padre Pio karịa ihe niile dịka nwoke na-ekpe ekpere. Site na mgbe o gbara iri ato, o rutuola aka na ndu nke mmuo ya nke a maara dika "uzo a na adighi agbanwe agbanwe".
Ekpere ya dịkarịsịrị mfe. Ọ hụrụ ekpere Rosary n'anya ma gwa ya ndị ọzọ. Nye onye jụrụ ya ihe nketa ọ chọrọ ịhapụ ụmụ ime mmụọ ya, azịza ya dị mkpirikpi bụ: "Nwa m nwanyị, Rosary". O nwere ozi puru iche nye nkpuru obi na Purgatory ma gba onye obula ume ka o kpeere ha ekpere. O kwuru si: "Anyị ga-eji ekpere anyị wepu Purgatory".
Fada Agostino Daniele, onye nkwuputa ya, onye isi na ezigbo enyi ya kwuru, sị: “Otu nwere mmasị na Padre Pio, mmekọrịta ya na Chineke.
Jizọs kpere ekpere: ihi ụra n'aka Kraịst
Abalị ọ bụla, ka ị na-ehi ụra, a na-akpọ gị ka ị hie ụra n’amara na ebere nke Onyenwe anyị. A na-akpọ gị ka ị zuru ike na ogwe aka ya iji mee ka ọ dị ọhụrụ ma nye ume ọhụrụ. Ihi ụra bụ onyinyo nke ekpere, n’ezie, ọ nwere ike bụrụ ụdị ekpere. Izu ike bu izu ike n'ime Chineke.Uzo obula nke obi gi aghagh ibu ekpere nye Chineke na iti-obi obula nke obi ya aghaghi ibu becomezumike nke izu ike gi (Lee Journal # 486).
Ọ bụ Jizọs n’onwe ya kpere ekpere. I na-ehi ura n’iru Chineke? Chee echiche banyere ya. Mgbe ị lakpuru ụra, ị na-ekpe ekpere? I na-aju Dinwenu anyi ka O jiri amara ya gbaa gi gburugburu ma were ura jiri aka Ya makụọ gi? Chineke gwara ndị nsọ nke oge ochie okwu site na nrọ ha. O tinyere ndị nwoke na ndị nwanyị dị nsọ n’ime nnukwu izu ike iji weghachi ma wusie ha ike. Gbalịa ịkpọbata Onyenwe anyị n’ime uche gị na obi gị ka ị na-edina ala hie ụra n’abalị a. Ka ị na eteta, ka Ya bụrụ onye izizi ga-ekele gị. Ekwe ka ezumike nke abalị ọ bụla bụrụ izu ike na ebere Chineke Ya.
Onyenweanyị, ana m ekele gị maka ije ije kwa ụbọchị. Ekele dịrị m maka ụzọ mụ na gị si aga n’ụbọchị m dum ma kelee gị maka ịnọnyere m mgbe m zuru ike. M na-enye gị, n'abalị a, ezumike m na nrọ m. A na m akpọ gị oku ijide m nso gị, ka Obi ebere gị wee bụrụ ụda nwayọ nke na-eme ka mkpụrụ obi m ike gwụrụ. Jesus ekwere m na gị.
Sistersmụnne nwanyị abụọ na-ekpe ekpere kwa ụbọchị maka ọgwụgwọ nne ha
Prayingmụaka ndị na-ekpe ekpere n’ihu ụlọọgwụ, vidiyo nke metụrụ n’obi anyị niile
Nwatakịrị na-enyere Jizọs aka ibuli Obe, akụkọ banyere foto a magburu onwe ya
Akụkọ ọrụ ebube nke nnukwu ihe oyiyi a nke Virgin Mary
Nwoke nzipu n'hu kwụ ọtọ n'ihu ihe oyiyi Madonna wee kpee ekpere (VIDEO)
Ọ na-anata Oriri Nsọ nke Mbụ wee malite ịkwa ákwá, vidiyo ahụ na-aga gburugburu ụwa